Ogaden News Agency (ONA) – Wasaarada G/dhiga Itoobiya oo Lunsatay Lacago Ay Ciidanku Lahaayeen.
Wasaarada G/dhiga Itoobiya oo Lunsatay Lacago Ay Ciidanku Lahaayeen.
Xog rasmi ah oo ay heshay Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa muujinaysa musuq maasuq gaamuray oo kadhex jira Wasaarada Gaashaan dhiga Itoobiya, kaas oo ilaa hada maamulka cusub uusan uhelin xal waara.
Wakaalada Wararka Ogadenia ONA ayaa heshay waraaq cabasho ah oo ay qoreen ciidamada Itoobiya ee wadamada dibada shaqada ugu maqan, kuwaas oo UNta kaqaata lacago faro badan oo guno ah.
Waraaqdan kasoo baxday ciidamada Itoobiya ee wadanka dibadiisa kumaqan oo Raysal-wasaaraha cusub ee Itoobiya kusocotay ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba la musuqay ama la lunsaday lacagihii lasiin jiray ciidanka Nabad Ilaalinta ee Itoobiya dibada uga maqan.
Waraaqda Abiye Axmed kusocotay ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay mushaarkooda qaadan jireen 43% halka 57% ay kudhici jirtay Account ay wasaarada gaashaan dhigu maamusho, waxayna ciidanku intaas kudareen in gabi ahaanba lacagahaas la dhacay oo aysan qaadanin.
Saraakiisha sar sare ee ciidamada ayaa lasheegay in ay lug wayn kulahaayeen lunsashada lacagahan ay ciidanku lahaayeen, waxaana larumaysan yahay in saraakiisha ciidanka iyo wasaarada gaashaan dhigu ay wada dhaceen lacagahan ciidanku ay lahaayeen oo markii hore loosheegay in xaasaskooda loo uruurin doono.
Maamulka cusub ee Abiye Axmed uu hogaamiyo ayaa kala guri la qodxihii ay daadiyeen maamulkii hore ee wayaanaha, kaas oo guud ahaan wadanka kadhigay meel xaaluf ah isla markaana amaan ay amaan xumo kajirto.